Ukudlulisa Izinsiza kusebenza Bearings Abakhiqizi, Suppliers - China eveza Izinsiza kusebenza Bearings Factory
WWI amabombo yazuza okuhlangenwe nakho ocebile usinika amabombo kwenqwaba zokuthutha, agcine zokuthutha, iyunithi zokuthutha, izinhlobo escalators futhi zommbila, futhi njll eveza imishini. Ukudlulisela imishini akudingeki okusezingeni eliphezulu imfuneko isivinini, Nokho isivinini ongaphakeme kusho imfuneko phezulu izakhi ugingqe futhi Raceway. WWI amabombo ngeke ukukunikeza professional amabombo isixazululo ngokusebenzisa egcizelele steel ejwayelekile kanye nokwelashwa ukushisa ubuchwepheshe bethu.
zokuthutha Bulk kabanzi ngaphandle edinga ukusebenza ukubekwa uphawu kangcono ukuvimbela ukusilaphazeka uthuli. Ngaphandle ukuthi sihlobene kufanele bakwazi ukuthwala umthwalo kanye nomthelela umthwalo ekuphileni super eside zokusebenza. WWI amabombo ukukunikeza isixazululo esingcono kakhulu kusuka impahla eluhlaza, ukwelashwa ukushisa, isakhiwo uphawu futhi begcoba.
Escalators futhi zommbila
Escalators futhi zommbila izidingo ephakeme ku nokwethenjelwa, ukuphepha kanye umsindo. WWI amabombo liyoqina kakhulu futhi kunokwethenjelwa lapho Phendula.
imishini 6319RZ1 eveza
6319 imishini Ukudlulisela
6317 imishini Ukudlulisela
6314 imishini Ukudlulisela
imishini 6313ZZ eveza
6312 imishini Ukudlulisela
6312 6313ZZ eveza imishini
6309-1 imishini Ukudlulisela
imishini 6224ZZ eveza
6224ZZ-1 imishini Ukudlulisela
6224 imishini Ukudlulisela
6224-1 imishini Ukudlulisela
imishini 6213RZ eveza
6213black imishini Ukudlulisela
imishini 6212RZ eveza
6211 imishini Ukudlulisela
6207 6311 6209 imishini Ukudlulisela
imishini 6206RZ1 eveza